Breking: नेपालमा आजै थपिए यति धेरै सङ्क्रमित ? – List Khabar
Home / समाचार / Breking: नेपालमा आजै थपिए यति धेरै सङ्क्रमित ?
Breking: नेपालमा आजै थपिए यति धेरै सङ्क्रमित ?
admin January 17, 2022 समाचार Leaveacomment 98 Views
काठमाडौं- नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ६७३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरमा १४ हजार १४ नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ५७४७ र ६७३४ नमुनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ९८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
यस्तै ५४७ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने ३ जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर ३०८७७ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। २४ घण्टामा देशभर १४३३६० जनाले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाएका छन्।
सक्रिय संक्रमित ३० हजार नाघे
संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने र निको हुने संख्या अत्यन्तै न्यून भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या ३० हजार नाघेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल ३० हजार ८ सय ७७ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
तीमध्ये १ हजार ९६ जना संस्थागत र २४ हजार ५ सय ८४ जना होम आइसोलेसनमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल १ सय २२ जना आइसियु र २९ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन करिब ४ हजार संक्रमित थपिए
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार कूल संक्रमितमध्ये ३९३९ संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा देखिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंमा २९४३, भक्तपुरमा २०१ र ललितपुरमा ७९५ संक्रमित भेटिएएका छन्।
योसँगै काठमाडौं उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या १९३७७ पुगेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा १३९८६, ललितपुरमा ३५५५ र भक्तपुरमा १८४६ संक्रमित रहेका छन्। यो कूल सक्रिय संक्रमित संख्याको ६२ प्रतिशत बढी हो। सोमबारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कूल सक्रिय संक्रमित ३० हजार ८७७ रहेका छन्।
Previous मन्त्री आलेका कारण सयौं मानिस खतरामा, कहाँ-कहाँ पुगेका थिए आले ?
Next काठमाडौंमै दाजुभाईले मिलेर यस्तो सम्म गरेछन्